Ny Milina Automatique Automatique
Alarobia 18 Aogositra 2021
Ny Milina Automatique Automatique Ny Toromac dia novolavolaina manokana tamin’ny endriny mahery vaika mba hitondra fomba vaovao handorana ny ranom-boasary makirana nahosotra. Natao ho an'ny fitrandrahana ranom-boankazo farany dia natao ho an'ny trano fisakafoanana, kafeeter ary toeram-pivarotana ary ny famolavola vidiny dia ahafahan'ny traikefa am-pirahalahiana amin'ny famelana tsiro, fahasalamana ary fahadiovana. Izy io dia manana rafitra maoderina izay manapaka ny voany amin'ny lafiny mitsangana ary manosika ny halavola amin'ny alàlan'ny tsindry mihodina. Midika izany fa tanteraka ny fampisehoana raha tsy mikapoka na hikasika ny akorandriaka.
Ny Kodiarana Fiovana
Talata 17 Aogositra 2021
Ny Kodiarana Fiovana Kely tsy ho ela dia ny fivoarana ny fitaterana fitaterana herinaratra dia eo am-baravarana. Amin'ny maha mpanamboatra fiara, i Maxxis dia mieritreritra foana hoe ahoana no ahafahany mamolavola rafitra maranitra izay afaka mandray anjara amin'io fironana io ary manampy mihitsy aza ny hanafainganana azy. T Razr dia kodiaran-tsaina mandroso noho ny filana. Ny tsindrona noforonin'izy ireo dia nahitana ny toe-javatra mitondra fiara ary manome famantarana mavitrika hanova ny kodiarana. Ny halehiben'ny halatra dia nanitatra sy nanova ny faritry ny fifandraisana ho valin'ilay famantarana, noho izany dia manatsara ny fampisehoana mivalona.
Ny Serivisy Fanolorana Ny Mozika
Alatsinainy 16 Aogositra 2021
Ny Serivisy Fanolorana Ny Mozika Musiac dia milina fahazoan-dàlana mozika, mampiasa fandraisana anjara mavitrika mba hahitana safidy mazava ho an'ireo mpampiasa azy. Mikendry ny hanolotra antom-pifandraisana hafa hisedra ny autokrasia algorithm. Ny sivana ny fampahalalam-baovao dia lasa fomba fiasa tsy azo ihodivirana. Saingy, miteraka fiantraikan'ny efitrano misy echo izy io ary manery ny mpampiasa azy ao amin'ny faritra mampionona azy amin'ny alàlan'ny fanarahana mivantana ny tiany. Ny mpampiasa dia lasa pasifika ary ajanony ny fanontanian'ireo safidy omen'ny masinina. Ny fandaniam-potoana handinihana ny safidy dia mety hampitombo ny vidin'ny bio be loatra, fa io no ezaka izay miteraka traikefa misy dikany.
Alahady 15 Aogositra 2021
Ny Fahaiza-Mandray Vahiny
Asabotsy 14 Aogositra 2021
Ny Fahaiza-Mandray Vahiny Ny Serenity Suites dia mitoetra ao amin'ny fipetrahan'ny Nikiti, Sithonia any Chalkidiki, Gresy. Ny sarotra dia misy singa telo misy suite roapolo ary dobo filomanosana. Ireo trano dia manamarika endrika lalina amin'ny faravodilanitra rehefa manome fomba fijery tsara kokoa mankany amin'ny ranomasina. Ny dobo filomanosana no ivon'ny fampiantranoana sy ny kojakojam-bahoaka. Ny trano fandraisam-bahiny dia manana mari-pamantarana ao amin'ilay faritra, ho toy ny akorandriaka extrovert misy kalitao anatiny.
Fandaharan'asa Hetsika Famolavolana
Zoma 13 Aogositra 2021
Fandaharan'asa Hetsika Famolavolana fampirantiana, fifaninanana famolavolana, atrikasa, consulting fanabeazana momba ny fanabeazana ary famoahana tetikasa kendrena hampiroboroboana ny mpamorona sy marika Rosiana any ivelany. Ny zavatra ataontsika dia mandrisika ny mpamorona miteny Rosiana hanatsara ny fahalalany sy ny fahaizany amin'ny alàlan'ny tetikasa iraisampirenena ary manampy azy ireo hahalala ny anjara asan'izy ireo amin'ny famolavolana fiaraha-monina, ny fomba fampiroboroboana sy fanaovana ny vokariny, ary ny famoronana tena fanavaozana.
Calendar 2014 “Farm” Ny Kalandrie Zoma 17 Septambra
Calendar 2014 “Town” Kalandrie Alakamisy 16 Septambra
Artificial Topography Ny Topografika Artifisialy Alarobia 15 Septambra
Ny Milina Automatique Automatique Ny Kodiarana Fiovana Ny Serivisy Fanolorana Ny Mozika Karazana Piano Ny Fahaiza-Mandray Vahiny Fandaharan'asa Hetsika Famolavolana